bakhaarka 800 aluminium aluminium ee saqafka midab samaynta mashiinka mashiinka mashiinka INDONESIA
Somali bakhaarka 800 aluminium aluminium ee saqafka midab samaynta mashiinka mashiinka mashiinka INDONESIA
800 foornada alwaaxa aluminium wuxuu leeyahay muuqaal qurux badan iyo midab cad. Waxaa si weyn loo isticmaalaa beerta, warshad, hudheelka, hudheelka, hoolka bandhigga, fasaxyada, dhismayaasha qadiimiga ah iyo villa casri ah.
800 oo aluminium ku samaysan oo alwaax ah ayaa lagu iibiyaa moobiilka inta badan iibiya Indonesia. Waxay jecel yihiin saqafka alwaaxa aluminium ee saqafka saqafka guryaha.
Qeybta 800 ee aluminiinka aluminiumka ka hor inta aadan duuduubin koolladu waa 914mm, alaabada la isticmaalo ee la galiyey birta qalinka leh ee PPGI. Ka dib markii dukumiinti ay sameysanto ballaadhka guud waa 800mm.
Qodobka 800 oo aluminium ee aluminiumka ah oo la dhiso oo ka samaysan mashiinka mashiinka mashiinnada waxaa ka mid ah dekoiler, mashiinka wax lagu sameeyo, nidaamka xakamaynta kombiyuutarka, xakamaynta internetka iyo miiska saaran.